नवलपरासी र चितवनमा स्थानिय तहका उम्मेदवार यी संचारकर्मी | Hulaki Online
नवलपरासी र चितवनमा स्थानिय तहका उम्मेदवार यी संचारकर्मी
आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवश मनाइदै छ । नेपालमा विश्वप्रेस स्वतन्त्रताको यो संघारमा धेरै मिडियाकर्मी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागि हुँदै छन् । कतिपय देशमा मिडियाकर्मी राजनीतिसंग साथ साथ जोडिदा पूर्वाग्रह हुने डरले मिडिया त्यागेका कतिपय उदाहरण पनि छन् । स्थानीयत तहको निर्वाचनमा मिडियाकर्मीले आफ्नो पेशा छोड्नै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति भने छैन । तर नैतिकताका हिसावले धेरैले प्रेसको यात्रालाई टुंगाएका भने छन् ।
केही वर्ष अघि फ्रान्समा फ्रान्स्वाँ होलाण्डले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिदै गर्दा उहाँकी प्रेमिकाले समेत समाचार संस्थाबाट राजिनामा दिनुभएको थियो । नेपालकै सन्दर्भमा पनि मिडिया छोडेर राजनीतिमा जानेहरु देखिन्छन् । केही समय अघि रविन्द्र मिश्र पत्रकारिता छोडेर राजनीतिमा सक्रिय बन्नुभयएको छ । यसैगरी नेपाली काँग्रेसका सन्त नेता स्व. कृष्ण प्रसाद भट्राई पनि पत्रकारीता त्यागेर राजनीतिमा लाग्नुभएको थियो । भट्राई नेपाली राजनीतिका क्षेत्रमा सम्माननीय नेताका रुपमा स्थापित हुनुभएको छ । नेपाली राजनीतिमा पत्रकारीता त्यागेर राजनीतिमा लाग्नेहरु प्रशस्त उदाहरण छन् । जसले राजनीतिमा राम्रो भविष्य बनाएका छन् ।
चितवन नवलपरासीमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही पत्रकार मेयर देखी वडा सदस्यसम्म उम्मेदवारी दिएका छन् । भरतपुर महानगरपालिको उपमेयरमा कालिका एफएमकी स्टेशन म्यानेजर रिना गुरुङले उम्मेदवारी दिनुभएको छ । गुरुङले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट उम्मेद्वारी दिनुभएको हो ।
यसैगरी माडी एफ एमकी कार्यक्रम संयोजक सविता चौधरी अपेक्षाले माडी नगरपालिकाको उपमेयर पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । उहाँ माओवादी केन्द्रबाट माडी नगरपालिकाको उपमेयरमा उठ्नुभएको हो ।
गैँडाकोट नगरपालिका वाड नं. ७ को सदस्यमा पत्रकार महासंघ नवलपरासीका कोषाध्यक्ष इश्वरीप्रसाद चापागाईंले उम्मेदवारी दिनुभएको छ । चापागाईं विजय एफ एमका प्रशासन प्रमुख समेत हुनुहुन्छ । चापागाँईले नेपाली काँग्रेसबाट वडा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनुभएको हो ।
यसै गरी नवलपुर क्षेत्रको बुलिङटार गाउँपालिकाको अध्यक्षमा विद्रोही गिरि उठ्नुभएको छ । गिरि पनि पत्रकार हुनुहुन्छ । उज्यालो अनलाइनका जिल्ला संवाददाता, गिरिले नेकपा एमालेबाट बुलिङटारको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ । बिजयखबर बाट , बैशाख-२०, २०७४